नेपाली समाज टेक्ससको नेतृत्वमा को ?
प्रकाशित: २०७४ मंसिर १३
चर्चामा चार, सर्वसम्मतिको आश
डलास, टेक्सस । नेपाली समाज टेक्ससमा नयाँ नेतृत्वको चर्चा सुरु भएको छ । आउँदो महिना डिसेम्बर २३ मा हुने निर्वाचनपश्चात् नेतृत्वमा को आउला भन्ने चासो टेक्सस नेपाली समुदायमा बढेको छ । तुलनात्मक रुपमा दुई वर्षअघि सम्पन्न निर्वाचनको समयमा जस्तो चर्चा–परिचर्चा अहिले नभए पनि आकांक्षीहरु भने देखिएका छन् । आकांक्षीहरुले एकले अर्कोलाई मनाउन लागिपरेका छन् । यहाँ हुने सामाजिक कार्यक्रमहरुदेखि लिएर कुनै प्रयोजनमा जमघट हुँदासमेत यो विषयमा छलफल गर्ने क्रम बढेको छ ।
चुनावको मिति नजिकिएसँगै आन्तरिक रुपमा नेपाली समाज टेक्ससको नेतृत्वलाई लिएर समाजसँग जोडिएकाहरुबीच यस सन्दर्भमा गन्थन सुरु भएको छ ।
निर्वाचनमा मत प्रक्रियाबाटै नेतृत्व चयन हुने स्थिति आउँदा समाज विभाजित हुने त होइन भन्ने चिन्तासमेत नेपाली समुदायमा बढेको छ । समाजको अहिलेको वर्तमान नेतृत्वसमेत मतदान प्रक्रियाबाटै आएको भए पनि अहिले यहाँको नेपाली डायस्पोरा गैर आवासीय नेपाली संघ अमेरिकाको केही महिना अघि सम्पन्न निर्वाचनले प्रभावित भएको थियो । यसको असरलाई ख्याल गर्दै समाजलाई फेरि यो चुनावका कारण यहाँको मन कतै विभाजित हुने त होइन भन्नेतर्फ पनि यसपटक सम्बन्धित व्यक्तिहरु सचेत भएको देखिन्छ ।
नेपाली समाज टेक्सससँग जोडिएका पूर्व र वर्तमान पदाधिकारी तथा सदस्यहरु नै गत एनआरएन अमेरिकाको निर्वाचनमा विभिन्न समूहमा छुट्टिएका थिए । यहाँका पूर्व र वर्तमान पदाधिकारी डा. केशव पौडेल, गौरीराज जोशीदेखि रविना थापा हुँदै रामसी पोखरेल, कृष्ण पोखरेलको समर्थनमा लाग्नेदेखि कतिपय त विभिन्न पदमा उम्मेदवारसमेत भएका थिए । पोखरेल र जोशी समाजका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् भने पूर्वअध्यक्ष भुवन आचार्य रविना थापाको समूहबाट चुनाव लडेका थिए । डा. केशव पौडेलको समूहबाट वर्तमान अध्यक्ष कृष्ण लामिछानेले बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा उम्मेदवारी दिँदै चुनाव जितेका थिए ।
खुला रुपमा चर्को गरी उम्मेदवारीका विषयमा आकांक्षीहरु बाहिर नआए पनि आन्तरिक रुपमा समर्थन बटुल्न, माहौल बनाउन र निर्वाचन भए आफ्नो पक्षमा आउने मतको आँकलन गर्न जुटेका छन् । विभिन्न समूहको जमघट पनि यो बीचमा बढेको छ । यो निर्वाचनमा मिलाएर सर्वसम्मतिको पहलसमेत भइरहेको हुँदा एक कदम अघि बढिहाल्ने स्थितिमा समेत आकांक्षीहरु देखिएका छैनन् ।
नेतृत्व चयनका लागि हुने निर्वाचनमा अहिले पनि उम्मेदवारी दिन सकिने गरी निर्वाचन समितिले व्यवस्था मिलाएको छ । तर, अहिलेसम्म भने कसैको उम्मेदवारी परेको छैन । त्यसो त गत चुनावमा २ हजार ४ सय ४४ मतदाता रहेको समाजमा अहिलेसम्म त्यसको १० प्रतिशतले पनि सदस्यता नवीकरण गरेको अवस्था छैन । तर पनि समाजका महासचिव कमल सत्याल समय बाँकी रहेको र अन्तिम समयसम्म आइपुग्दा लगभग २५ सयदेखि २६ सयले सदस्यता लिने आशा गरिएको बताए ।
यस पटक नेतृत्वका लागि वर्तमान उपाध्यक्ष कमल सापकोटा, महासचिव कमल सत्याल, सहकोषाध्यक्ष सुमन थापा र पूर्वमहासचिव विजयराज भट्टराईको चर्चा चलेको छ ।
एउटा समूहले विजयराजलाई फेरि उम्मेदवार बन्न भनिरहे पनि उनी भने व्यक्तिगत रुपमा त्यो सोचाइमा नभएको बताउँछन् । ‘केही साथीहरु, अग्रजहरुले उठ्न भनिरहनुभएको छ, त्यसलाई म सम्मान गर्छु । तर, मैले त्यस्तो निर्णय गरिसकेको छैन,’ भट्टराईले भने– ‘८ वर्षभन्दा बढी सक्रिय भएर एनएसटीमा काम गरें, फेरि पनि जो साथी आउँदा पनि मेरो सहयोग रहन्छ ।’ तर उनले समाजलाई विभाजित हुन नदिई मिलाउने नेतृत्वको खाँचो रहेको बताए ।
समाजको नेतृत्वका लागि सुमन थापाको पनि चर्चा छ । वर्तमान सहकोषाध्यक्षसमेत रहेका थापालाई केही पूर्व अध्यक्ष तथा पदाधिकारीले अगाडि बढ्न भनिरहेको बताइन्छ । व्यावसायिक क्षेत्रमा समेत सक्रिय उनलाई युवा वर्गको समेत साथ रहने भएकाले निर्वाचन हुँदा परिणाम आफ्नो पक्षमा पर्ने विश्वास थापालाई सहयोग गर्नेहरुको रहेको छ । उनी पनि आफ्नो चर्चालाई नकार्दैनन् ।
‘मलाई राम्रै सपोर्ट छ । चुनाव नै हुने भयो भने पनि सहज नै हुन्छ भन्ने मलाई छ । यसबारेमा छलफल भइरहेको छ, सुझावहरु प्नि आइरहेका छन् । गर्न सकिन्छ भन्ने पनि छ,’ उनले भने– ‘समाज सबैको साझा चौतारी भएकाले मिलेर नै जाने हो । जो आउँदा पनि एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने वातावरण हुनुपर्दछ । त्यसका लागि म सधैं खुल्ला छु ।’ थापाले राम्रो व्यक्ति आउँदा आफू पदमा रहे पनि, नरहे पनि सहयोग गर्ने बताए । मतदान प्रक्रियाबाटै नेतृत्व चयन हुने अवस्था आउँदा थापासँगै उनको पनि समूह बन्ने बुझिएको छ । उनको समूहले परम्परागतरुपबाट चलिआएको संस्थालाई फरक दिशाबाट चलाउनुपर्ने आवश्यकता बोध गरी निर्वाचनमा जान चाहेको बताइएको छ ।
यता, वर्तमान महासचिव कमल सत्यालको पनि अध्यक्षमा चर्चा छ । तर, वर्तमान उपाध्यक्ष कमल सापकोटाको पनि चर्चा भैरहँदा उनी भने ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको बताइन्छ । ‘म नेतृत्वका लागि आकांक्षी हुँ । यो स्वाभाविक पनि हो । गर्न पनि सक्छु, मलाई सहयोग गर्ने टिम पनि छ,’ उनले भने– ‘तर मेरो नै समितिका उपाध्यक्षले आकांक्षा राख्दा त्यसलाई मैले अन्यथा लिने कुरा भएन, यसले मलाई स्वाभाविक रुपमा पर्ख र हेरको निर्णयमा पु¥याएको छ । समाजमा जाने भनेको दिन र केही गर्नका लागि हो, त्यसैले यसमा मिलेर नै जानुपर्दछ ।’ त्यसो त गत निर्वाचनमा दुवै कमल एउटै समूहबाट चुनाव लडेर विजयी भएका थिए । दुई कमलको सम्बन्ध पनि नजिक रहेको छ । यो हँुदा कमल सापकोटा अध्यक्षमा उठिरहँदा सत्याल महासचिवमै दोहोरिने उनीहरु नजिक रहेकाहरु बताउँछन् । त्यसो त सत्याल पनि सापकोटा अध्यक्षमा हुन चाहँदा आफू महासचिवमै दोहोरिन पनि अप्ठ्यारो नमान्ने बताउँछन् । अर्कोतर्फ थापा र सापकोटाको सम्बन्ध पनि निकै नजिकको रहेको छ । त्यसैले एकका विरुद्ध अर्को उम्मेदवार बन्ने अवस्था सायदै नआउने उनीहरु निकटको भनाइ रहेको छ ।
यसरी ३ आकांक्षीसँगै अर्का आकांक्षीका रुपमा कमल सापकोटासमेत रहेका छन् । अहिलेका उपाध्यक्ष सापकोटाको अध्यक्षको उम्मेदवारीलाई सर्वसम्मति बनाउने पहलसमेत अगाडि बढेको छ । तर नेतृत्व मात्रैं सर्वसम्मति बनेर नहुने अवस्थासमेत रहेको छ । कम्तीमा पदाधिकारीमा सर्वसम्मति खोज्ने प्रयाससमेत भइरहेको छ । नेतृत्वमा आकांक्षी सापकोटासमेत सबैलाई मिलाएर लानुपर्ने बताउँछन् । उनी समाजलाई विभाजित हुने मिलाएर लानुपर्ने भएकाले सबैलाई समेट्नेतर्फ हामी सबैं लाग्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
‘अध्यक्षमा उठ्ने भनिरहेको छु । तर, सँगसँगै म सबैलाई मिलाउनुपर्दछ भन्नेमा पनि उत्तिकै चिन्तित छु,’ सापकोटाले भने– ‘म नेतृत्वमा आऊ नआऊ तर सबैले यो संस्थालाई उत्तिकै माया गर्ने गरी हामीले हाम्रो भूमिका देखाउनुपर्दछ । उपाध्यक्ष भएपछि नेतृत्वमा आउने चाहना हुनु स्वाभाविक नै भए पनि आफूभन्दा राम्रो गर्ने साथीहरु आउनुभयो भने म कन्भिन्स नहुने कुरा हुँदैन ।’
हुन त नेपाली समुदायसम्बद्ध निर्वाचनमा व्यक्तिगत आकांक्षाले मात्रै त्यसमा प्रभाव पार्दैन । कतिपय अवस्थामा उम्मेदवारको चाहनाभन्दा बाहिरी वातावरण र दबाबले समेत भूमिका खेलेको देखिन्छ । इगो हर्टले गिजोलेको समाजमा धेरै जो व्यक्तिगत, व्यावसायिक, राजनीतिक, समूहगत हुन्छन् ती फ्याक्टरले समेत काम गरेको हुन्छ । तर पनि सर्वसम्मतिको प्रयास भइरहेको छ । कमल सापकोटाको नेतृत्वमा उपाध्यक्षमा सुमन थापा, महासचिवमा कमल सत्याल, कोषाध्यक्षमा दिवस थापा, सचिवमा सुमन कार्की र सहकोषाध्यक्षमा सुदिप ढुंगानालाई ल्याएर पदाधिकारी मिलाउने कोसिससमेत गरिएको छ । तर, दिवसले भने कोषाध्यक्षमा नदोहोरिने चाहना राखेको बताइन्छ, सबैले उनलाई मनाउन सक्ने विश्वाससमेत राखेका छन् । तर, सर्वसम्मतिको पहल भइरहे पनि सबै सन्तुष्ट हुने अवस्था नहुने भएकाले मिलाउन गाह्रो देखिन्छ । पदाधिकारीमा आउनेमध्ये कार्कीले त्यही पदमा दोहोरिनेछन् भने ढुंगाना यस अघिका कार्यसमिति सदस्य हुन् । यदि निर्वाचन नै हुने हँुदा भने दिवस उपाध्यक्षमा र ढुंगाना कोषाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइन्छ ।
आउँदो निर्वाचनबाट पदाधिकारीका साथै महिला र युवा संयोजक तथा ६ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् भने आइटी, स्वास्थ्य र पाठशाला संयोजक भने नयाँ कार्यसमितिले मनोनित गर्नेछ ।
यसपटक पूर्वअध्यक्षहरु खुलेर भने कसैको समर्थनमा उभिएका छैनन् । आन्तरिक रुपमा जोड–घटाउ गरे पनि यही नै हुनुपर्दछ भनेर सार्वजनिक रुपमा उनीहरुले नबोलेको बताइन्छ । त्यसो त पूर्वअध्यक्ष बैकुण्ठ विक्रम थापा र डा. प्रेम अधिकारी निर्वाचन समितिमै रहेका छन् । संस्थापक स्व. हरिदेव जोशी रहेको समाजमा हालसम्म सुदीपराज शर्मा, बैकुण्ठ थापा, गौरी जोशी, रामसी पोखरेल, डा. प्रेम अधिकारी, भुवन आचार्य र कृष्ण लामिछानेले नेतृत्व गरिसकेका छन् । यहाँ नेतृत्व गरेकाहरु अन्य सामाजिक संस्थामा पनि उत्तिकै सक्रिय देखिन्छन् ।
चुनावको तयारी र उम्मेदवार चर्चा चलिरहँदा सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता थपिने क्रममा आएको सुस्तताले भने सबैलाई पिरोलेको छ । अहिलेसम्म निकै कम नवीकरण भएको अवस्था छ भने सदस्यता पनि थपिने संख्या पनि कम छ । वर्तमान अध्यक्ष लामिछाने सदस्यता खासगरी चुनावी प्रयोजनमै हो भन्ने बुझाइले पनि यसो भएको हुन सक्ने बताउँदै चुनाव आउन अझै बाँकी रहेकाले सदस्यता नवीकरण र थपिनेमा विश्वस्त छन् ।
‘सदस्यता भनेको भोटिङ राइट हो । तर, हामीले मर्दापर्दा गर्ने सहयोगसँग सदस्यता कुनै साइनो खोज्दैनौ,’ लामिछानेले भने– ‘समाज चाहिन्छ, समाजलाई बलियो बनाउन सदस्य बन्नुहोस् मात्र भन्छौं, जसले बुझ्नुहुन्छ उहाँहरु बन्नुहुनेछ ।’ सदस्यतालाई मतसँग बुझिने हुँदा यसलाई बढाउन उम्मेदवारहरु प्नि सक्रिय हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
टेक्सस राज्यको परिचय पत्र वाहक हरेक नेपाली यो समाजको सदस्य बन्न सक्ने प्रावधान रहेको यो संस्थाको सदस्य बन्न २० डलर, विद्यार्थी र अग्रज नागरिकलाई १० डलर तथा आजीवन सदस्यता शुल्क १ सय ५० डलर राखिएको छ । यसको सदस्यभन्दा प्रत्यक्ष लाभसमेत हुन सकोस् भनेर समाजले क्यारोलटनमा रहेको वि केयर क्लिनिक सपोर्टसँग मिलेर न्यूनतम शुल्कमा आवश्यक परीक्षणको व्यवस्थासमेत मिलाएको छ ।